ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ကုလသမဂ္ဂ (ယူကရိန်း) ခေါင်းဆောင်များထံ သတင်းစကား - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေးလှုပ်ရှားမှု
ဧပြီလ 17, 2022 လှုပ်ရှားမှုသတိပေးချက်များ, သတင်းနှင့်အထူးများ 0
“ယူကရိန်းစစ်ပွဲဟာ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုသာမက လူသားတွေရဲ့ရှင်သန်မှုကိုပါ ခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်နေသော နိုင်ငံအားလုံးအား စစ်ပွဲများမပြီးဆုံးမီ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများဖြင့် စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ခြင်းဖြင့် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် သံခင်းတမန်ခင်းထားရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုထားသည်။ - စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြေရှင်းချက်ကွန်ရက်၊ ဧပြီလ၊ 2022
ယူကရိန်းစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေး စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးကို လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်စေရန် ကုလသမဂ္ဂသည် ၎င်း၏တာဝန်ကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်နိုင်စေရန်၊ လူသားမျိုးနွယ်နှင့် ကမ္ဘာမြေကို ခြိမ်းခြောက်နေသော နျူကလီးယားစစ်ပွဲကို ဟန့်တားရန် ဤတောင်းဆိုချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးရန် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် စာဖတ်သူများအား ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
“အောင်မြင်သော မျိုးဆက်များကို ကယ်တင်ရန်…” ဖျက်သိမ်းခြင်း
လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ဗီတိုအာဏာကို ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းဖြင့် စတင်ပါ။
ယူကရိန်းအပေါ် ရုရှ၏ ရန်စမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပါဝင်သည့် နျူကလီးယားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်ချေကို မြှင့်တင်ပေးသောကြောင့် နိုင်ငံတကာစနစ်တွင် သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုအတွက် ငြင်းမရနိုင်သောလိုအပ်ချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ယူကရိန်း တော်လှန်ရေးအတွက် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ ပေးအပ်နေသော်လည်း အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ အသီးသီးသည် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် စွဲချက်တင်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းသည် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခကို အဆုံးသတ်ရန် သိသိသာသာ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း မရှိပေ။ ကုလသမဂ္ဂသည် ၎င်း၏ အကြီးမားဆုံးသော စိန်ခေါ်မှုများထဲမှ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင် လေဖြတ်နေပုံရပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက ထုတ်ပြန်သည့် တောင်းဆိုချက်ကဲ့သို့သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ကွန်ယက် (SDSN) အောက်တွင် တင်ထားသည်။
GCPE ရှိတယ်။ မကြာသေးမီက တင်ထားသော ဆောင်းပါးများ ပြောင်းလဲခြင်းဆီသို့ တိကျသောခြေလှမ်းအချို့ကို သတိပြုပါ။ လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ဗီတိုအာဏာ ဆိုင်းငံ့ထားမှုမှ လွဲ၍ လက်ရှိ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိဉာဉ်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို အဆိုပြုထားသည်။ ဟိ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ကွန်ယက်ကုလသမဂ္ဂအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပဏာမခြေလှမ်းများက ဤအဆင့်များကို တိုက်တွန်းသည်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေး အထွေထွေညီလာခံ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ညှိနှိုင်းနေစဉ် လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ဗီတိုအာဏာဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရန်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့များ စေလွှတ်ခြင်း။ ယင်းကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ကုလသမဂ္ဂအား ၎င်း၏ အခြေခံရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သော “စစ်ပွဲ၏ဘေးဒဏ်မှ မျိုးဆက်သစ်များကို ကယ်တင်ရန်” နှင့် ဤမျိုးဆက်အား နျူကလီးယား ဖျက်ဆီးမှုမှ ကယ်တင်ရန် အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။
ဤသည်နှင့် ယခင်ပို့စ်များ ကုလသမဂ္ဂ လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် အခြားဖြစ်နိုင်ချေများကို ကိုးကားထားသည်။ နောက်ဆက်တွဲ ပို့စ်များသည် လက်ရှိ ပဋိဉာဉ်အတွင်း အခြားဖြစ်နိုင်ချေများနှင့် စစ်ပွဲများအဆုံးသတ်ရေး စွဲချက်တင်ထားသော တစ်ခုတည်းသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၏ အစိတ်အပိုင်းတွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီး ပိုမိုသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကတိပေးသည့် ပဋိဉာဉ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေများကို အာရုံစိုက်ပါမည်။ GCPE အဖွဲ့ဝင်များ၊ စာဖတ်သူများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးနယ်ပယ်တို့မှ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့် နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်မှုအတွက် တင်ပြထားသော အဆိုပြုချက်များကြားတွင် ထင်ရှားသော ထင်ရှားသောအဆိုများမှာ လုံခြုံရေးကောင်စီကို ဗီတိုအာဏာဖြင့် ဖျက်သိမ်းပစ်မည်၊ နျူကလီးယားလက်နက်များ; စစ်ပွဲ၏အဖွဲ့အစည်း။ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာပေးဆရာများနှင့် ကျောင်းသားများအားလုံးသည် “စစ်ဘေးဒဏ်ကို အဆုံးသတ်ရန်” ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာစနစ်ဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးပြု ကြေညာချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးပါ။ ဤနေရာတွင် ပို့စ်တင်ပြီး အခြားသူများထံ ဖြန့်ဝေကာ သင့်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးထံသို့ မိတ္တူများ ပေးပို့ကာ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ သင်၏ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် (UN သံအမတ်ကြီးထံသို့) [BAR၊ 4/17/22]
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ကုလသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်များအားလုံးသို့ သဝဏ်လွှာပေးပို့သည်။
(ပြန်လည်တင်ပို့သည် - SDSN အသင်း ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၂၂).
ထုတ်ပြန်ချက်ကို လက်မှတ်ထိုးရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
UN Sustainable Development Solutions Network ၏ ခေါင်းဆောင်မှုကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် SDSN အသိုက်အဝန်း၏ အဖွဲ့ဝင်များထံမှ 
ဧပြီလ 14, 2022
ယူကရိန်းစစ်ပွဲသည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုသာမက လူသားမျိုးနွယ်၏ရှင်သန်မှုကိုပါ ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိသည်။ ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်းအရ စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ပြီး စစ်ပွဲမပြီးဆုံးမီ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများဖြင့် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် သံခင်းတမန်ခင်းထားကာ သံခင်းတမန်ခင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသော နိုင်ငံတိုင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
ကမ္ဘာကြီးသည် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်သို့ အမြန်ပြန်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင် ယေရှု သွန်သင်ပေးသော ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်သူများမှာ မင်္ဂလာရှိကြ၏။ ကုရ်အာန်သည် ဖြောင့်မတ်သူများကို ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။ Dar as-Salamချမ်းသာရာ၊ ဗုဒ္ဓက သင်ပေးတယ်။ အဟိမသက်ရှိသတ္တဝါအပေါင်းတို့အား အကြမ်းမဖက်ခြင်း။ ဟေရှာယသည် လူမျိုးတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး စစ်တိုက်တော့မည်မဟုတ်၊ စစ်မလေ့ကျင့်တော့မည့်နေ့ကို ပရောဖက်ပြုထားသည်။
နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ ပထမဆုံးသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများသည် မကြာမီအချိန်အတွင်း ယူကရိန်းနိုင်ငံသို့ ငြိမ်းချမ်းရေးယူဆောင်လာရန် မပျက်ကွက်ဝံ့ကြပေ။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အရ ယူကရိန်းကို ရုရှား၏ကျူးကျော်မှုသည် ရွံစရာကောင်းသည်၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီး၊ ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းတွင် ပိုမိုဆိုးရွားသော စစ်ရေးအရ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများ တည်ဆောက်နေခြင်းကြောင့် အထူးသဖြင့် ဤသည်မှာ မှန်ပါသည်။ သမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်က မကြာသေးမီက ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများကို “အဆုံးသတ်” ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ ဒါကို ကမ္ဘာက လက်မခံနိုင်ဘူး။ နိုင်ငံအားလုံးနှင့် ကုလသမဂ္ဂသည် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်အသက်သွင်းရန်နှင့် ပါတီများကို အောင်မြင်ပြီး လျင်မြန်သော သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိရန် ၎င်းတို့၏ စွမ်းအားဖြင့် အစွမ်းကုန်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးသည် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုနှင့် သံတမန်ရေးအရ လိုအပ်ပြီး၊ နောက်ဆုံးတွင် ယူကရိန်းကို ဖျက်ဆီးပစ်မည့် လက်နက်ကြီးများဖြင့် မလိုအပ်ပါ။ ယူကရိန်းတွင် စစ်ရေးအရ တိုးမြင့်လာမှုလမ်းကြောင်းသည် အာမခံချက်ရှိသော ဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့် စိတ်ပျက်အားငယ်စရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ၊ စစ်ရေးအရ တိုးမြင့်ခြင်းသည် အာမဂေဒုန်သို့ လှည့်ပတ်နေသော ပဋိပက္ခကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။
ကျူးဘားဒုံးပျံအကျပ်အတည်းသည် နျူကလီးယားစစ်ပွဲဆီသို့ ဦးတည်လုနီးနီးဖြစ်ကြောင်း သမိုင်းကဖော်ပြသည်။ ပြီးနောက် အမေရိကန်နှင့် ဆိုဗီယက်ယူနီယံခေါင်းဆောင်များသည် သံတမန်နည်းလမ်းအရ အဖြေရှာခဲ့ကြသည်။ နားလည်မှုလွဲမှားမှုများကြောင့် မသန်စွမ်းဆိုဗီယက်ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စင်းသည် အမေရိကန်၏နျူကလီးယားတုံ့ပြန်မှုကို အပြည့်အဝဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် နျူကလီးယားထိပ်ဖျားတော်ပီဒိုကို ပစ်လွှတ်လုနီးပါးနီးပါးဖြစ်သည်။ ရေငုပ်သင်္ဘောပေါ်ရှိ ဆိုဗီယက်ပါတီမှ အရာရှိတစ်ဦး၏ ရဲရင့်သော လုပ်ရပ်ကသာ တော်ပီဒိုပစ်ခတ်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ခဲ့သည်။
ရုရှားနှင့် ယူကရိန်းတို့သည် ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်း၏ အခြေခံရည်မှန်းချက်နှစ်ရပ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်- ယူကရိန်းနှင့် ရုရှားနှစ်နိုင်ငံစလုံးအတွက် နယ်မြေစိုးမိုးရေးနှင့် လုံခြုံရေး၊
ယူကရိန်းသမ္မတ Volodymyr Zelensky သည် သံတမန်နည်းလမ်းအရ ဖြေရှင်းချက်တစ်ရပ်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်- ယူကရိန်း၏ ကြားနေရေး - နေတိုးအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ခြင်း - နှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေဖြင့် လုံခြုံသော နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု။ ရုရှားတပ်များသည် ယူကရိန်းမှ ထွက်ခွာရမည်ဖြစ်သော်လည်း နေတိုးတပ်များ သို့မဟုတ် လက်နက်ကြီးများဖြင့် အစားထိုးရန် မဟုတ်ပါ။ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်စာတမ်းတွင် “ငြိမ်းချမ်းရေး” နှင့် “ငြိမ်းချမ်းသော” ဟူသော စကားလုံးများကို ၄၉ ကြိမ် အသုံးပြုထားသော်လည်း “မဟာမိတ်” သို့မဟုတ် “စစ်တပ်မဟာမိတ်” ဟူသော စကားလုံးကို တစ်ကြိမ်မျှ မသုံးခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သတိပြုမိပါသည်။
စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးတွင် ဉာဏ်ပညာနှင့် စိတ်ဆန္ဒ လိုအပ်သော်လည်း ပဋိပက္ခများ တိုးလာရန် လွယ်ကူသည်။ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များသည် ပဋိပက္ခနှင့်ပတ်သက်၍ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း နားလည်သဘောပေါက်ထားသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ချက်ခြင်းအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတွင် ၎င်းတို့၏ တူညီသောအကျိုးစီးပွားအတွက် လုံးလုံးညီညွတ်စွာ စည်းလုံးညီညွတ်သင့်ပြီး၊ အရပ်သားများကို တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ရပ်တန့်ရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ စစ်ပွဲသည် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ လူအသေအပျောက်နှင့် တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ် အပျက်အစီးများ—- သီတင်းပတ်များအတွင်း အပျက်အစီးများအဖြစ် လျော့ကျသွားသည့် ယူကရိန်းမြို့ကြီးများအတွက် ဒေါ်လာ ဘီလီယံရာနှင့်ချီသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ—နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် စီးပွားရေး မငြိမ်မသက် ကြီးထွားလာနေသည်- စားနပ်ရိက္ခာ ရှားပါးလာခြင်း၊ သန်းနှင့်ချီသော ဒုက္ခသည်များ ပြိုကွဲခြင်း၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များ၊ ကမ္ဘာတဝှမ်း နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများ မြင့်တက်လာကာ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံများနှင့် အိမ်ထောင်စုများကို ဆိုးရွားသောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများဖြင့် ထိပါးစေသည်။
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ (UNSC) သည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် ကမ္ဘာ့ မြင့်မြတ်သော တာဝန် ရှိသည်။ အချို့က UNSC သည် လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ရုရှားနှင့် ဤအခန်းကဏ္ဍကို မပါဝင်နိုင်ဟု ဆိုကြသည်။ သို့သော် ဤအမြင်သည် လုံးဝလွဲမှားနေသည်။ ရုရှား၊ တရုတ်၊ အမေရိကန်၊ ပြင်သစ်နှင့် ဗြိတိန်တို့သည် အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သောကြောင့် UNSC သည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အတိအကျ အာမခံနိုင်သည်။ UNSC အဖွဲ့ဝင် ၁၀ နိုင်ငံနှင့်အတူ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်ငါးနိုင်ငံသည် ယူကရိန်း၊ ရုရှားနှင့် အခြားကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် ၁၉၁ နိုင်ငံတို့၏ လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေစဉ် ယူကရိန်းပိုင်နက်နယ်မြေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မည့် ရှေ့ခရီးလမ်းကို ရှာဖွေရန် အချင်းချင်း ညှိနှိုင်းရမည်ဖြစ်သည်။ .
သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိရန် နှစ်ဘက်စလုံးကို ကူညီရန် တူရကီသမ္မတ Tayyip Erdogan ၏ ရဲရင့်ပြီး တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုအား ကျွန်ုပ်တို့ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုသော်လည်း ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်း တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမှု မရှိသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသည်။ သံတမန်များ အချင်းချင်း ထိုးဖေါက်ထိုးနှက်နေသည့် သံတမန်များ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ပုတ်ခတ်မှုများ ထပ်မံပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ မတောင်းဆိုပါ။ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်စာတမ်းမှ လမ်းညွှန်ထားသည့် စစ်မှန်သော စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုထားသည်။ အာဏာ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေနဲ့ ကွဲလွဲနေတဲ့ စစ်ရေးမဟာမိတ်တွေကနေမဟုတ်ဘဲ ကုလသမဂ္ဂ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကတဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်း ပြောနေတာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယနေ့ခေတ်၏ ထိပါးနှောင့်ယှက်မှုများအကြောင်းကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများကို သတိပေးရန် မလိုအပ်ပါ။ စစ်ပွဲသည် နာရီပိုင်းအတွင်း ပြင်းထန်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်သည်။ ၎င်းသည် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး နေ့စဉ် လူ ၅၀၀၀ ခန့် သေဆုံးနေပါသည်။ ယခုအခါ ကပ်ရောဂါ၏ တတိယနှစ်တွင်ပင်၊ ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး ထိခိုက်လွယ်သူများအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်သောနိုင်ငံများကြား ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုများကြောင့် အနည်းငယ်မျှ မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။
ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဒုက္ခသည်များ ကြီးမားစွာ ရွှေ့ပြောင်းခံရမှုနှင့် ငတ်မွတ်မှု မြင့်တက်လာမှုသည် ယခုအခါ ရောဂါ၊ သေဆုံးမှု၊ မတည်မငြိမ်မှုနှင့် ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများအတွက် ပိုမိုနက်နဲသော ငွေကြေးအခက်အခဲများကို ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိသည်။ စစ်ပွဲနှင့် ကပ်ရောဂါ၏နောက်ကွယ်တွင် ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးရှိနေခြင်းသည် လူသားများကို ဖြစ်ပေါ်စေသော ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏ နှေးကွေးသောရွေ့လျားနေသော သားရဲတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီး လူသားမျိုးနွယ်ကို ချောက်ကမ်းပါးဆီသို့ ဆွဲငင်စေသော နောက်ထပ်အဆိုးတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက IPCC အစီရင်ခံစာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရာသီဥတုဘေးကင်းရေး၏ အနားသတ်ကို ကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သတိပေးသည်။ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုကို ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း စစ်ပွဲသည် အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ဘက်ပေါင်းစုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လူသားလုပ် ရာသီဥတု အရေးပေါ်အခြေအနေမှ ကယ်တင်ရန် လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာငွေကို ဆုတ်ယုတ်စေသည်။
ပညာတတ်များနှင့် တက္ကသိုလ်ခေါင်းဆောင်များအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအတွက် မြင့်မားသောတာဝန်များကို အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ယနေ့ခေတ်ကဲ့သို့ အရေးကြီးသော ခေါင်းစဉ်များကဲ့သို့ ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရရှိရန် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အသိပညာများသာမက ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပြဿနာဖြေရှင်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေး လမ်းကြောင်းများကိုပါ သင်ကြားပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်လူငယ်များသည် ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း မတူကွဲပြားမှုများကို လေးစားရန်နှင့် အငြင်းပွားမှုများကို ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ရန်၊ စဉ်းလဲစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်စေရန် ယနေ့လူငယ်များအား ပညာပေးရမည်ဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ် စာတမ်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်း ၏ သဘောထား အရ ယူကရိန်း ၏ လုံခြုံရေး နှင့် လိုအပ်ချက် များနှင့် ကိုက်ညီသော အရေးတကြီး ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး ရေး တောင်းဆို သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ရပ် ကို ချမှတ် ရန် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံ မှ နိုင်ငံ အားလုံးကို တညီတညွတ်တည်း ခြွင်းချက် မထားဘဲ ရုရှား ၊ နှင့်အခြားလူမျိုးအားလုံး။
ယူကရိန်းစစ်ပွဲကို သံတမန်နည်းလမ်းဖြင့် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်ရန် ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်း၏ အလေးချိန် အပြည့်အ၀ကို ယူဆောင်လာစေရန်အတွက် လိုအပ်သမျှကာလပတ်လုံး အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတွင် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုထားသည်။
UNSC ၏ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်များအား သံတမန်ရေးအရ ငြီးငွေ့ခြင်းထက် သံခင်းတမန်ခင်းဖြင့် ညှိနှိုင်းရန်နှင့် စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေးသည် နိုင်ငံအားလုံး၏ လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်ကို အသိအမှတ်ပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုထားသည်။ ဗီတိုအာဏာသုံးရန် နေရာ မလိုအပ်ပါ။ တရားမျှတသော သဘောတူညီချက်ကို နိုင်ငံအားလုံးက ထောက်ခံပြီး ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းသူများ၏ ကျောထောက်နောက်ခံ ပြုနိုင်သည်။
ယူကရိန်းသည် ၎င်း၏ လေးနက်သော အသိအမှတ်ပြုမှုဖြင့် ရုရှားနှင့် တွေ့ဆုံရန် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း အချက်ပြခဲ့သည်။ အခု ရုရှားမှာလည်း ဒီလိုပဲ လုပ်ရမယ်။ ပြီးတော့ ဒီခက်ခဲတဲ့တာဝန်ကို ပြီးမြောက်ဖို့ ဒီနိုင်ငံနှစ်ခုကို ကမ္ဘာကြီးက ကူညီရမယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေအားလုံးကို သံခင်းတမန်ခင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကို အလေးပေးကြဖို့နဲ့ သြဇာအာဏာကို ဖြိုခွင်းဖို့၊ အရှိန်မြှင့်တောင်းဆိုဖို့နဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်ပွဲကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ တွေးတောကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ယနေ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်ပွဲသည် လူသားမျိုးနွယ်အတွက် သေကြောင်းကြံစည်မှု သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးသမားများကို သတ်ပစ်သည့်သဘောမှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အရာမျှ မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ယနေ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်ပွဲသည် မတွေးဝံ့စရာအဖြစ် ရှိနေရမည်ဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးသည် ကျေနပ်စရာမဟုတ်သလို ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်သူများသည် သူရဲဘောကြောင်သူများမဟုတ်ပေ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်သူများသည် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် အရဲရင့်ဆုံး ကာကွယ်သူများဖြစ်သည်။
ဂျက်ဖရီ Sachsဥက္ကဋ္ဌ၊ UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN); တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ၊ ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်
အန်တိုနီ အန်နက်Gabelli Fellow, Fordham တက္ကသိုလ်
Tamer Atabarutဒါရိုက်တာ၊ Bogazici University Lifelong Learning Center (BULLC); ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်၊ Sustainability Academy (SA); အမြင့်ဆုံးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နှင့် စာဖတ်သူများ ကိုယ်စားလှယ်၊ တူရကီစာနယ်ဇင်းကောင်စီ၊ ဦးဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နှင့် ယခင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ တူရကီတက္ကသိုလ်များ ဆက်လက်ပညာရေးစင်တာများကောင်စီ (TUSEM)၊
သံအမတ်ကြီး Richard L. Bernalအလေ့အကျင့်ပညာရှင်၊ SALISES၊ University of the West Indies
Irina Bokovaယူနက်စကို၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟောင်း၊
ဟယ်လင်ဘွန်း၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ကြားပို့ချမှုဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ပညာရေးကျောင်း၊ Howard တက္ကသိုလ်၊ SDSN USA ၏ ပူးတွဲဥက္ကဌ
ဂျက်ဖရီ Cheahအဓိပတိ၊ Sunway တက္ကသိုလ် | SDSN Malaysia ဥက္ကဌ၊
Jacqueline Corbelliတည်ထောင်သူနှင့် CEO၊ US Coalition on Sustainability
Mouhamadou Diakhatéပါမောက္ခ၊ Université Gaston Berger
Hendrik du Toitတည်ထောင်သူနှင့် CEO၊ Ninety One
Jennifer Stengaard GrossBlue Chip ဖောင်ဒေးရှင်းကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူ
Pavel Kabatအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ လူသားနယ်ခြားသိပ္ပံအစီအစဉ်၊ သိပ္ပံပညာရှင်ဟောင်း၊ WMO-UN; IIASA ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟောင်း
Brighton Kaomaကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ၊ UN Sustainable Development Solutions Network – Youth
Phoebe Koundouriပါမောက္ခ၊ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၊ အေသင်တက္ကသိုလ် စီးပွားရေးနှင့် စီးပွားရေး၊ ဥက္ကဌ၊ ဥရောပပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်စီးပွားရေးပညာရှင်များအသင်း (EAERE)၊
Zlatko Lagumdzijaပါမောက္ခ၊ ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း၊ Western Balkan SDSN ပူးတွဲဥက္ကဌ
Upmanu Lallဒါရိုက်တာ၊ ကိုလံဘီယာ ရေစင်တာ၊ အကြီးတန်း သုတေသန သိပ္ပံပညာရှင်၊ နိုင်ငံတကာ ရာသီဥတုနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် သုတေသနဌာန၊ Alan & Carol Silberstein, Columbia တက္ကသိုလ် အင်ဂျင်နီယာ ပါမောက္ခ
Felipe Larrain Bascuñan၊ Pontificia Universidad Católica de Chile စီးပွားရေးပညာရှင်
Klaus M. Leisingerဥက္ကဌ၊ Foundation Global Values ​​Alliance; UN Global Compact ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အထူးအကြံပေးဟောင်း
Justin Yifu Linဌာနမှူး၊ Institute of New Structural Economics & Institute for South-South Cooperation and Development၊ National School of Development၊ ပီကင်းတက္ကသိုလ်၊
ဂေါ်ဒွန်ဂျီလျူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျောင်း၊ PKU Institute for Global Health and Development ဌာနမှူး
Siamak Loniဒါရိုက်တာ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျောင်းများအစီအစဉ်၊ UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN)၊
Gordon McCord၊ တွဲဖက်သင်ကြားရေးပါမောက္ခနှင့် တွဲဖက်ဌာနမှူး၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် မဟာဗျူဟာကျောင်း၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်၊ ဆန်ဒီယေဂို၊
Miguel Ángel Moratinosစပိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း
Joanna Newmanအကြီးတန်း သုတေသနအဖွဲ့၊ King's College London၊
Amadou Ibra Niangစီအီးအို၊ Afrik ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ
Ngozi Ifeoma Odiakaပါမောက္ခ၊ သီးနှံထုတ်လုပ်မှုဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးကောလိပ်၊ ဖက်ဒရယ်စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် Makurdi၊ Benue ပြည်နယ်၊ နိုင်ဂျီးရီးယား (ယခု Joseph Sarwuan Tarka တက္ကသိုလ်)၊
Roza Otunbayevaကာဂျစ္စတန်သမ္မတဟောင်း၊ ဖောင်ဒေးရှင်း “ရိုဇာ Otunbayeva” ၏ အကြီးအကဲ၊
Antoni Plasènciaညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal)၊
Labode Popoolaသစ်တောစီးပွားရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါမောက္ခ၊ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သစ်တောဌာန၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ သဘာဝအရင်းအမြစ်ဌာန၊ Ibadan တက္ကသိုလ်၊
Stefano QuintarelliInternet Entrepreneur ၊
Sabina Rattiအီတလီ Alliance for Sustainable Development၊ Laudato Si Action Platform နှင့် Fuori Quota အမှုဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်၊
Irwin Redlenerအကြီးတန်းသုတေသနပညာရှင်၊ ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်၊ Albert Einstein ဆေးပညာကောလိပ်၊ ကလေးအထူးကု၏လက်တွေ့ပါမောက္ခ
အန်ဂျလို Riccaboniပါမောက္ခ၊ စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုကျောင်း၊ Siena တက္ကသိုလ်၊ သဘာပတိ၊ PRIMA ဖောင်ဒေးရှင်း
Katherine Richardson၊ကိုပင်ဟေဂင်တက္ကသိုလ်၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုသိပ္ပံစင်တာ၏ပါမောက္ခနှင့်ခေါင်းဆောင်
SE မွန်များ။ Marcelo Sánchezအဓိပတိ၊ The Pontifical Academy of Sciences
ဘုရင်ကြီး Khalifa Muhammad Sanusi IIUN SDG တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေနှင့် 14th Emir of Kano
Marco F. Simoes Coelho၊ ပါမောက္ခနှင့် သုတေသီ၊ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလေ့လာရေး COPPEAD စင်တာ၊ Rio de Janeiro
ဒါဝိဒ်သည်စမစ်ညှိနှိုင်းရေးမှူး၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အင်စတီကျု၊ The University of the University of the West Indies
Nicolaos Theodossiouလက်ထောက်ပါမောက္ခ၊ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ နည်းပညာကျောင်း၊ Thessaloniki Aristotle တက္ကသိုလ်၊
John ThwaitesMonash Sustainable Development Institute မှ သဘာပတိ၊
Rocky S. Tuanဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ် ဒုတိယအဓိပတိနှင့် ဥက္ကဋ္ဌ၊
Albert van Jaarsveldညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)၊
Patrick Paul WalshUniversity College Dublin ၊ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လေ့လာရေး ပါမောက္ခ ၊
Hirokazu Yoshikawa၊ Courtney Sale Ross သည် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ပါမောက္ခနှင့်
Soogil Youngဥက္ကဌကြီး၊ SDSN တောင်ကိုးရီးယား
*ထုတ်ပြန်ချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ သွားပါ။ ဒီမှာ.
 ကုလသမဂ္ဂ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖြေရှင်းချက်ကွန်ရက် (SDSN)၊ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယို ဂူတာရက်စ်၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုအောက်တွင် လုပ်ဆောင်နေသော တက္ကသိုလ်များ၊ ပညာရှင်များ၊ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် ယုံကြည်ချက်ခေါင်းဆောင်များ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆီသို့ လမ်းကြောင်းများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် ကူညီပေးရန်ဖြစ်သည်။
pdf ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ ဒီမှာ
ဧပြီလ 27, 2016 quotes 1
ကျေးဇူးပြု၍ ဤအကွက်လပ်ကို ချန်ထားခဲ့ပါ ကမ်ပိန်းတွင်ပါဝင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို #SpreadPeaceEd ကိုကူညီပါ။ First name * Last name * Email Address * Country *Country *AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaidjanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia-HerzegovinaBotswanaBrazilBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
ဧပြီလ 6, 2017 သတင်းနှင့်အထူးများ 2
ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိပါကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိပါကငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်ပါ၊ သို့သော်အမျိုးသမီးများမရှိလျှင်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဖြစ်နိုင်ကြောင်းသံအမတ် Anwarul K. Chowdhury ကယခင်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်မှပြောကြားခဲ့သည်။ သူသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မတ်လတွင်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ဥက္ကas္ဌအဖြစ် UNSCR 1325 ကိုနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုအစပြုသူဖြစ်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများသည်ပညာရေးတွင်ဗျူဟာကျသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်လိမ့်မည်
ဇူလိုင်လ 14, 2016 သတင်းနှင့်အထူးများ, ပေါ်လစီ 0
ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီသည်ယခုနှစ်နွေ ဦး ရာသီတွင်လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏သုံးဆယ့်သုံးကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတွင်လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးခြင်းနှင့်သင်တန်းများဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်ကိုသဘောတူလိုက်သည်။ ၂၀၁၁ မှကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးပညာရေးနှင့်သင်တန်းကြေငြာချက်အပြီးငါးနှစ်အလိုတွင်လူ့အခွင့်အရေးပညာရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီအမျိုးသားအဆင့်အကောင်အထည်ဖော်ရန်အစိုးရအဖွဲ့များ၏ကတိကဝတ်ကိုဤဆုံးဖြတ်ချက်ကထပ်လောင်းအတည်ပြုသည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]